LL Cool J, 50 Cent n'etiti Rappers na-eme nhọrọ ka mma kemgbe ọnwụ nke kpakpando Hip Hop - Blọọgụ ahụike 2022
LL Cool J, 50 Cent n'etiti Rappers na-eme nhọrọ ka mma kemgbe ọnwụ nke kpakpando Hip Hop
Ozi a na-ebuga site na egwu hip hop kacha ewu ewu taa na-agụnyekarị ihe ndị a: ịnwale ọgwụ ọjọọ, nwee ọtụtụ mmekọahụ, na ịṅụ mmanya ruo mgbe ọhụụ gị ga-ere ọkụ.
Mana ụfọdụ ihu hip hop maara nke ọma na-ekwupụta nchegbu ha gbasara mmesi ike nke omenala na omume enweghị isi na-atụ anya na ozi ahụ ga-erute ndị ogbo ha na-ewu ewu yana ndị na-eto eto, na-eṅomi ndị Fans.
"Ọ dịghị uru n'ezie ịrapara onwe gị ọnwụ. Ọ dị ka igbu onwe gị. Ị ga-ahọrọ n'etiti ihe na-eme gị obi ụtọ na ihe na-eme ka obi dị gị mma," onye ọsụ ụzọ rap dị afọ 51 bụ Melle Mel gwara ndị Associated. Pịa.
Ọnwụ nke Kriss Kross rapper Chris Kelly mgbe ọ dị afọ 34 n'izu gara aga bụ oku ịkpọte ọtụtụ mmadụ, mana Kelly abụghị kpakpando mbụ hip hop nwụrụ site na ịṅụbiga mmanya ókè. Southern rapper Pimp C na Wu-Tang Clan's O'l Dirty Bastard nwụrụ n'ime afọ 30 ha site na ịṅụbiga mmanya ókè.
Na ịṅụbiga mmanya ókè abụghị nanị ihe kpatara ya. Na 1995, N.W.A rapper Eazy-E nwụrụ site na nsogbu nke AIDS. Onye na-eme ihe nkiri Heavy D nwụrụ site na mkpụkọ ọbara na ngụgụ ya n'afọ 2011. Na onye na-abụ abụ rap bụ Nate Dogg nwụrụ n'afọ 2011 site na nsogbu ọrịa strok.
N'oge na-adịbeghị anya, ndị na-ese ihe dị ka Rick Ross na Lil Wayne tara ahụhụ karịa otu njide n'ihi enweghị ụra na oke oriri nke "sizzurp." N'ụzọ dị mma, ndị omenkà abụọ ahụ lanarịrị egwu ọdịdọ ha
Ndị agadi hip hop na-elezi ahụike ha anya ugbu a, na-eme nhọrọ ịkwụsị ịṅụ mmanya na isi na mgbatị ahụ. Dị ka Melle Mel, ha ekpebiela iwesa ozi ha n'ọha. Nke a bụ ụfọdụ ndị rapper kachasị ewu ewu na-eme ezigbo ọganihu maka ahụike ka mma:
1. LL Cool J ka wuru dum mma ika gburugburu ya nkume siri ike ABS na dị ọcha iri àgwà.
2. 50 Cent anabatala atụmatụ "rie dị ọcha ka ọ dị nro", na-ekwu: "Achọrọ m ibi ndụ dị mma, ogologo ndụ na ahụike, yabụ enwere m ahụike."
3. Snoop Dogg nwere ike ị smokeụ nnukwu wii wii, mana ọ naghị aṅụ mmanya. "Gin na Juice" rapper kwuru, "Ọ bụghị m ọnụ ala. Achọghị m ime nke a na ahụ m ọzọ. Achọrọ m ịlanarị."
4. RZA nke Wu-Tang Clan abụrụla onye anaghị eri anụ afọ iri na ise ma na-eme quigong ka ọ dị mma.